Hordhaca: Athletic Bilbao vs Barcelona - Koeman Oo
Barcelona ayaa caawa u safreysa Athletic Bilbao iyagoo raadinaya booska seddexaad ee La Liga.
Blaugrana, oo ku dhibtooday khadka dhexe ee horyaalka, ayaa ka mid noqotay afarta ugu sarreysa waqtiga ugu dheer in ka badan 15 sano, laakiin caawa waxay heystaan ​​fursad ay ugu soo xirmaan kaalinta saddexaad.
Athletic Bilbao ayaa Barcelona ku soo dhawayn doonta garoonka San Mames Stadium iyada oo uu hogaaminayo tababaraha cusub ee Marcelino kaas oo badalay Gaizka Garitano.
Tababare Ronald Koeman oo kooxdiisa ay toban dhibcood ka hooseyso kooxda hogaanka heysa ee Atletico Madrid ayaa haatan kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka La Liga, waxayna u dagaallameysaa inay ku guuleysato horyaalka sanadkii labaad oo xiriir ah
Kulankoodii ugu dambeeyay, waxa ay si dirqi ah 1-0 kaga badiyeen Huesca Axadii waxa ayna shan dhibcood u jiraan Real Madrid oo hal kulan u harsan yahay.
Marcelino, oo xilka kala wareegay Garitano ee Bilbao, ayaa ku soo laabtay garoomada markii ugu horreysay tan iyo bishii Sebtember 2019, waxaana imaatinkiisa la filayaa inuu khibrad cusub u keeno kooxda.
Lixdii kulan ee ugu dambeysay Barcelona wax guuldaro ah ma gaarin, afar guul iyo labo gool ayey dhalisay. Laakiin Athletic Bilbao ayaa haysata laba guul, laba barbaro iyo laba guuldaro.
Garoonka: San Mames Stadium
Koeman ayaa la filayaa inuu isbedel ku sameeyo safkiisa koowaad ee kulanka Huesca axada, iyadoo Antoine Griezmann uu soo laabtay.
Miralem Pjanic ayaa laga yaabaa inuu ka sii horreeyo Sergio Busquets, Francisco Trincao ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo horyaalka.
Marcelino ayaa ku soo gali doona shaxda 4-4-2, iyadoo Alex Berenguer iyo Iker Munian ay kalsooni qabaan, halka Inaki Williams uu ka ciyaari doono garabka weerarka.
Executive criticized for banning get admission to by means of armed guards